MYUTSAWMYIT : တိုင်းရင်းသားသတင်း: January 2013
“တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဗမာခေါင်းဆောင်တွေ ပူးပေါင်းကြိုးစားမှုနဲ့ လွတ်လပ်ရေးရယူခဲ့တာ ၆၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ တိုင်းရင်းသားရပိုင်ခွင့်များ ကနေ့တိုင် မရရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေရပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အချက် ကို အစိုးရကနေ အလေးအနက်ထားပြီး ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိတဲ့ စစ်ပွဲကို ရပ်တန့်ဖို့ ၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ တိုက်တွန်း တောင်းဆိုပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း (သျှမ်းပြည်နယ်၊
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:04 PM No comments:
`“ရန်သူကကိုယ့်အိမ်ထဲရောက်မလာခင် ကြိုတင်ကာကွယ်တာဟာ အကောင်း ဆုံးနည်းလမ်း`“ ဆိုသည့်စကားအတိုင်း 9/11နောက်ပိုင်း အမေရိကန်အစိုးရကအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုကာကွယ်ခဲ့သည်၊
ဝပြည်တပ်မတော်ရဲ.လှုပ်ရှားမှုဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်၊ ဗမာ စစ်တပ်တွေရဲ. စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို သတိနဲ. စောင့်ကြည့်နေခဲ့ တာကြာလှပါပြီ၊ ဗမာစစ်တပ်နှင့် ဝတပ်မတော်တို. ပေါင်းပြီး သျှမ်းပြည် တပ်မတော်တောင်ပိုင်းကိုတိုက်ခဲ့ဖူးတယ်၊ သို.သော်၊
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 10:52 PM No comments:
သျှမ်း/တောင် ပင်လုံမြို့နယ်၌ တပတ်အတွင်း တိုက်ပွဲ ၃ ကြိမ်ဖြစ်
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်လုံမြို့နယ်အတွင်း၌ ယခုတပတ်အတွင်း တိုက်ပွဲ ၃ ကြိမ်ထက်မနည်း ဖြစ်ပွါး ခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်းသတင်းရပ်ကွက်ကဆိုပါသည်။
“ ၁၉ ရက်နေ့မှာနဲ့ ၂၁-၂၂ ရက်နေ့တွေမှာ ၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွါးတယ်။ တောင်ပိုင်းသျှမ်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ မြန်မာ့ တပ် မ တော်ပေါ့။ ဆနိန်းရွာဘက် ကပေါ့။ အခုလဆန်းပိုင်းက သျှမ်းတပ်ဖွဲ့က စစ်သား ၂ ယောက်ဆိုင်ကယ် စီး တာကို မြန်မာစစ်တပ်ကတွေ့တော့ လိုက်ပစ်တယ် ။ သျှမ်းစစ်သား ၂ ယောက်ကလဲ ဆိုင်ကယ် ပစ်ပြီး ထွက်ပြေးတယ်။ သူတို့ဆိုင်ကယ် ဗမာစစ်သားသိမ်းသွားတယ်။ အဲဒီကစပြီးတော့ သျှမ်းတပ်က ပြန်စောင့်ရင်းနဲ့ အခုလို တိုက်ပွဲဖြစ်သွားတာ” ဟု ပင်လုံရောက် ဆနိန်းဒေသခံကပြောသည်။
အပစ်ရပ်စာချုပ် ဘယ်တော့မှ စဖျက်မည် မဟုတ်ဟု RCSS ဥက္ကဌပြော
မြန်မာအစိုးရ နှင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော်တို့ အပစ်ရပ်ထားသော်လည်း နှစ်ဖွဲ့အကြားတိုက်ပွဲ အကြိမ် ၆၀ ကျော် ဖြစ်ပွားရာမှာ မြန်မာ့တပ်မတော် က ကျူးကျော်ရန်စခဲ့သောကြောင့် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အပြင် မြန်မာ့ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ပိုမို နီးကပ်သော ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ရမည်ဟု RCSS ဥက္ကဌ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်က ပြောသည်။
“ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်း မြန်မာ့တပ်မတော်က နယ်ကျွံလို့ ဖြစ်တာ။ ကျနော်တို့ကတော့ အပစ်ရပ်စာချုပ်ကို ဘယ်တော့မှ စတင်ဖေါက် ဖျက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်တံ့ဖို့ အစိုးရတပ်နဲ့ ပိုမိုတွေ့ဆုံရ မယ်” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ် ကပြောသည်။
ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အစိုးရနဲ့ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက် ရေးပါတီအကြား ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က တည်းက အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပေမယ့် လူမှုအခြေပြု အသင်းအဖွဲ့များမှ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ယနေ့ထိ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းပြီး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု မပြုလုပ်နိုင်ဘဲရှိ နေ ပါတယ်။
အစိုးရနဲ့ KNPP အကြားအပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုအပေါ် လူထုဘက်က အပြည့်အ၀မယုံကြည်သေး တဲ့အတွက် လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတို့ အနေဖြင့် လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ဖို့ ခက်ခဲကြောင်း ကရင်နီလူငယ်အစည်းအရုံး (KNYO) အဖွဲ့ကပြောပါ တယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:18 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 6:43 PM No comments:
ဒီမိုကရေစီ နဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ် ဆိုတာကို အားလုံး နားလည် အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆော့ဝဲနဲ့ကွန်ပြူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ က ဆော့ဝဲ ဖြစ်တယ်။ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်က ကွန်ပြူတာဖြစ်တယ်။ ဆော့ဝဲနဲ့ ကွန်ပြူတာ ပေါင်းစပ်မှာသာ ကွန်ပြူတာတခုအလုပ်လုပ် လာ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဟာ ကွန်ပြူတာတလုံးဆိုရင် ရိုးရိုးကွန်ပြူတာမဟုတ် အဲပ်လ်ကွန်ပြူတာ ( Apple Computer) တလုံး လို ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတယ်။ လုံခြုံတယ်။ ပြည်နယ်တွေကွဲမထွက်သွား ဘူး။ လူလူခြင်းခွဲခြားဆက်ဆံလုို့ မရဘူး။ တခြားကွန်ပြူတာတွေလို အပြင် ကဗိုင်းယပ်စ်တွေ တိုက်ခိုက်လို့ မရဘူး။
ဆော့ဝဲပဲရှိပြီး ကွန်ပြူတာကမကောင်းရင် အလုပ်လုပ်လုို့ မရဘူး။
ဒီမိုကရေစီတော့ရှိတယ်။ ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုမလုပ်နိင်ရင် မအောင် မြင်နိုင်ဘူးပေါ့။
ဖယ်ဒရယ်မလိုပါဘူးလို့ ပြောခြင်း၊ ကျနော်တို့လူတွေက ဖယ်ဒရယ် ဆိုတာ ခွဲထွက်ရေးလို့ ပဲသိတယ်။ ဖယ်ဒရယ်ကိုမပြောကြပါနဲ့ကွာ ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ ရှင်းပြရမှာပေါ့။ ကွန်ပြူတာတလုံးလိုတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြရမှာပေါ့။
ဒါက တပြည်လုံးနိမ့်ကျသွားတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲ။
တယောက်က ကျနော်ကို ဆွေးနွေးတယ်။ တောင်ကြီးကိုသွားဖို့ ဗီဇာ မလျောက်နိင်ဘူးတဲ့။ အမေရိကန် ကိုရောက်လာတဲ့ မြန်မာ ဒုက္ခသည် မိသားစုဟာ နယူးယောက်မှာနေတယ်။ ကားလီဖိုးနီးယား ကို သွား လှည်ဖုို့ အပြီးပြောင်းသွားဖို့သူဟာ ဘယ်သူဆီမှာ မှ ဗီဇာလျောက် စရာမလိုတဲ့အပြင် ဟိုရောက်ရင် အဲ့စရင်းတောင် တိုင်စရာမလိုဘူးဆိုတာ သူသိထားပုံမရဘူး။
ယခုလ ဇန္န၀ါရီ (၉) ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်အခြေစိုက် အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး သည် လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းတည်ရှိရာစခန်းများသို့ နယ်လှည့်ကြောင်း သိရသည်။
တိုင်းမှူးဟာ ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့ အခြေစိုက် အမှတ် (၂၈၉) ခြေလျင်တပ်ရင်းသို့ ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက်နေ့ ညနေ (၄) နာရီမှာ ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့်အပေါ် KNU တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ပဒိုမန်းမန်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုး ဦးဆောင်သည့် ကေအဲန်ယူ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အချို့သည် ဇန်န၀ါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်း စိန်နှင့် တွေ့ဆုံ၍ ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက် ခမ်းနှင့် အတူတကွ ညစာစားခဲ့သလို ဇန်န၀ါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင်လည်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အပြင် ရန်ကုန်ရှိ ကရင်လှုမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဤခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကေအဲန်ယူ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ပဒိုမန်းမန်းမန်းကို ဇန္န၀ါရီလ (၈) ရက်နေ့က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
KIC။ ကေအဲန်ယူအနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကို သွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကို ဘာများ အသိပေးချင်ပါသလဲ။
ဖြေ – ကျနော်တို့ခရီးစဉ်ကတော့ သမ္မတကြီးရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အပေါ်မှာပဲ ကျနော်တို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံ တာဖြစ်တယ်။ တပြိုင်နက်တည်းမှာ သမ္မတကြီးကော၊ ဒုသမ္မတကော နောက်ပြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပါ ကျနော်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မသွားခင်က ကျနော်တို့ စဉ်းစားတာကတော့ ကေအဲန်ယူနဲ့ အစိုးရကြားမှာရှိတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စကို ပိုမိုပြီး တော့ ခိုင်မှာအောင်လုပ်ဖို့ရယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ရပ်စဲနိုင်ဖို့
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 9:08 PM No comments:
“ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက် အဓိကတော့ နိုင်ငံရေးပြဿနာ ကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းမှသာ ခိုင်မာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်။
အဲဒီဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာလည်း တိုင်းရင်းသား တစုတည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလို့လည်း မရဘူး”ဟု ပဒိုမန်းမန်းမန်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ KNU သည် နေပြည်တော်သို့သွား၍ ယခုလ ဇန်န၀ါရီလ ၅ ရက်နေ့က သမ္မတနှင့် အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင် ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲအရေးကိစ္စကိုလည်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအပါအ၀င် ပြည်သူလူထုအားလုံး ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက် သွားရန်လိုကြောင်းလည်း ပဒိုမန်းမန်းမန်းက ဆိုသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 12:51 AM No comments:
အစိုးရ၏ အပစ်ရပ်ရေးသည် အချိန်မရွေး ပျက်နိုင်ကြောင်း KNPP ကဆို
ကရင်နီ တိုးတက်ရေး ပါတီ ( KNPP) နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့တို့ ရယူထားသော အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ရေးသည် အချိန်မရွေး ပျက်စီး သွားနိုင်ကြောင်း အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ခူဦးရယ်က ဆိုပါသည်။
“ဒီရယူထားတဲ့ အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး အပေါ်မှာပေါ့လေ ကျနော်တို့ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းဝေးကနေ ပြန်လည်သုံးသပ် ထား တာရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်လောက်ကပေါ့လေ။ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ လက်ရှိ အနေအထားတွေဟာ အခု ကျနော်တို့ ရယူထားတဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဟာ အချိန်မရွေး ပျက်စီးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။” ဟု ဆိုပါသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:31 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:39 PM No comments:
ရှမ်းပြည်၏ နစ်နာချက်များ အပိုင်း-၅ နိဂုံး (တောင်ကြီး ဦးထွန်းမြင့်)
သတ္တုလုပ်ငန်းပြီးတဲ့နောက် ဒုတိယလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ သစ်တောလုပ်ငန်းကို တင်ပြဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်လဲ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ သစ်တောတွေဟာ ဘယ်လောက်အထိပေါများ ကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာကို ပထမဆုံး တင်ပြပါရစေ။ ၁၉၃၈-၃၉ ခုနှစ် စာရင်းအရဆိုရင် သစ်တောရဲ့ အကျယ်အဝန်းဟာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၁၉၀၃၆ ဖြစ်ပြီး သစ်တောလုပ်ငန်းမှ ရှမ်းအစိုးရက ရရှိတဲ့ အခွန်တော်ငွေကတော့ ၁၁ သိန်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလောက် ပေါများကြွယ်ဝတဲ့ သစ်တောတွေဟာ ရှမ်းပြည်မှာ ရှိပေမဲ့လဲ သစ်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အာဏာကိုတော့ သတ္တုလုပ်ငန်းနည်းတူပင် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ရှမ်းအစိုးရက မရရှိပါဘူး။ ဗဟိုအစိုးရကသာလျှင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 2:22 PM No comments:
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 8:05 PM No comments:
ရှမ်းပြည်၏ နစ်နာချက်များ အပိုင်း-၄ (တောင်ကြီး ဦးထွန်းမြင့်)
သဘာပတိနှင့် ဘဝတူ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ခင်ဗျား။
ရှမ်းအမျိုးသားတွေဟာ နိုင်ငံရေးအရ ဘယ်လိုဘဝမျိုးမှာ ကျရောက်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို တင်ပြပြီးခဲ့တဲ့နောက် စီးပွားရေးအရ ဘယ်လို ဆုံးရှုံးနစ်နာနေရတယ်။ ဘယ်လို သွေးစုပ်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဆက်လက်ပြီး တင်ပြပါရစေ။
ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ပါဝင်နေကြတဲ့ ပြည်နယ်များအနက် ရှမ်းပြည်နယ်ဟာ စီးပွားရေးအားဖြင့် အတောင့်တင်းဆုံး၊ သယံဇာတ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ အပေါများအကြွယ်ဝဆုံး ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအားလုံးက သိရှိကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရှမ်းပြည်ရဲ့ အဓိကအသက်သွေးကြော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ -
(၃) လယ်ယာခြံမြေ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအားလုံး သိရှိကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်၏ နစ်နာချက်များ အပိုင်း-၃ (တောင်ကြီး ဦးထွန်းမြင့်)
ဒီမိုကရေစီ ဆန်းစစ်ရေး ဂဏ္ဍမှာ ယခု ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်နဲ့ အဆင့်အတန်းကို ကြွရောက်လာတဲ့ လူမျိုးစုပေါင်းစုံ ရှေ့မှောက်မှာ အခွင့်ရလို့ တင်ပြပါရစေ။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရ သဘောတရားကို အကျယ်တဝင့်တင်ပြဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ကမ္ဘာမှာ ခေတ်စားလာခဲ့တာတော့ နှစ်ပေါင်းရာစုနဲ့ ချီပြီး အတော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ထပ်မံပြီး မတင်ပြလိုတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ယေဘူယျသဘောကိုတော့ အကြမ်းအားဖြင့် တင်ပြဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာ လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆို ဝေဖန်နိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားထုတ်ဝေနိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးနိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အဝဝတွေပေါ်မှာ မူတည်တယ်ဆိုတာ အားလုံးက လက်ခံသဘောပေါက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ။ ဒီလိုဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီအခြေခံဝါဒပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ထူထောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးထဲမှာ ကြယ်တပွင့်အဖြစ် ဝင်းဝင်းတောက်ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည်ကြီးမှာ ဘာဝါဒတွေက ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးနေသလဲ ဆိုတာကို တင်ပြလိုပါတယ်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 11:57 AM No comments:
ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုရာတွင် ယခင် ကရင်နီပြည်နယ် (ကယားပြည်နယ်) မှ ကိုယ်စားလှယ် အနေဖြင့် သွားရောက်ခဲ့သူ ကယန်းအမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး သိုက်ဗဟန်းနှင့် ကိုလိုနီခေတ် တလျှောက်လုံး လက်နက်စွဲကိုင် တော်လှန်ခဲ့သော ကယန်းနာမည်ကျော် ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ပျံ၏ မွေးရပ်မြေလည်းဖြစ်၊ ဂူသင်္ချိုင်းလည်းရှိရာ ဖာလိုင်ရွာအား ကျော်လွန်လာခဲ့ပြီး နောက် ဘိန်းစိုက်ခင်းများနှင့် အဆီခြစ်ယူပြီးဖြစ်သော ဘိန်းပန်းပွင့်ခြောက် တချို့ကို စတင်မြင်တွေ့ လိုက်ရသည်။
Posted by Myutsawmyit.blogspot.com at 1:46 PM No comments:
စစ်တပ် အားကောင်းအောင် မွမ်းမံ မည်ဟု MNLA ဒု - စစ်ဦးစီး ချုပ်ဆို
မွန်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ လျော့ရဲ နေသည့် တပ်ဘက် ဆိုင်ရာ များကို ပြန်လည် သုံးသပ် ထားပြီး အားနည်းချက် များကို ပြင်ဆင် သွားမည် ဖြစ်ကာ တပ်ဘက် ဆိုင်ရာ ပိုမို ခိုင်မာ အားကောင်း စေရန် ပြုလုပ် သွားမည်ဟု တပ်မှူးများ ညီလာခံ အပြီး၌ ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ်မှ ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနသို့ ထုတ်ဖော် ပြောကြား ခဲ့သည်။
“လက်ရှိ တပ်တွင်းများ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ထဲက လျော့ရဲ နေတဲ့ အချက်တွေ ပြန်သုံးသပ် ထားတယ်၊ ပြင်ဆင် နိုင်အောင် ဆောင်ရွက် သွားမယ်၊ နောက် အရွယ် ရောက်တဲ့ သူတွေ အားလုံးပေါ့ သူတို့ ဆန္ဒ ရှိရင် စစ်ပညာ သင်ပေးဖို့ အစီ အစဉ် ရှိပါတယ်။ ကျွှန်တော်တို့ တပ်ကို ပိုမို အားကောင်း ခိုင်မာ လာအောင် ပြုလုပ် သွားပါ့မယ်” ဟု မွန်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် နိုင်လယီ ဂကောင်းမှ ပြောသည်။